■သုံးစှဲသူတှကေိုဘာ‌တှကွေံနလေဲမသိဘူး မာ့ချဇူကာဘတျပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ Meta ဆိုတာက ဟီဘရူးဘာသာအရ သခွေငျးတရားလို့ အဓိပ်ပာယျရတဲ့စကားလုံးဖွဈနေ
■မာ့ချဇူကာဘတျပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ Meta ဆိုတာက ဟီဘရူးဘာသာအရ သခွေငျးတရားလို့ အဓိပ်ပာယျရတဲ့စကားလုံးဖွဈနေ
ပွီးခဲ့တဲ့ကွာသပတေးနကေ့ Facebook ဟာ သူတို့ရဲ့ကုမ်ပဏီနာမညျကို Meta လို့ ပွောငျးလဲခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ မာ့ချဇူကာဘတျရဲ့ အခုလိုမြိုး နာမညျပွောငျးလဲမှုအပျေါမှာ လူအမြားအပွားက စိတျဝငျစားနခေဲ့ကွပွီး အနာဂတျမှာဖွဈတညျလာမယျ့ ပုံရိပျယောငျကမ်ဘာအတှကျ Facebook ဘကျက ကွီးမားတဲ့ခွလှေမျးတဈခုကို ပွငျဆငျလိုကျတာလညျးဖွဈတယျလို့ ယူဆခဲ့ကွပါတယျ။…
ဒါပမေယျ့လညျး Facebook ၊ Instagram ၊ Whatapp တို့ကတော့ ကုမ်ပဏီအောကျမှာ မူလအတိုငျး ရှိနမှောဖွဈပါတယျ။ VR နားကွပျတှအေသုံးပွုကာ ဂိမျးကစားခွငျး၊ အလုပျနဲ့ဆကျသှယျနိုငျတဲ့ အှနျလိုငျးလောက၊ နရောဒသေတဈခုကို အမှနျတကယျရောကျရှိသှားသလို ခံစားစရေမယျ့ ပုံရိပျယောငျကမ်ဘာကွီးကို ဖနျတီးဖို့အတှကျလညျး ဖွဈတယျလို့ ကုမ်ပဏီဘကျက ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။….
အခုအခါမှာတော့ Meta ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ပတျသကျပွီး ထူးဆနျးတဲ့အကွောငျးအရာတဈခုဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ဟီဘရူးဘာသာစကားအရ Meta ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ်ပာယျဟာ သခွေငျးတရားလို့ ချေါဆိုတာဖွဈကွောငျး နညျးပညာကြှမျးကငျြသူတဈဦးဖွဈတဲ့ Nirit Weiss-Blatt က ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ ဂြူးအသိုငျးအဝိုငျးမှာတော့ ဒီနာမညျကို နောငျနှဈပေါငျးမြားစှာ လှောငျပွောငျကွလိမျ့မယျလို့ သူမက ဆကျရေးခဲ့တယျလို့ Time of Israle သတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။…
မတျောတဆမှု ဒါမှမဟုတျ တိုကျခိုကျမှုတှဖွေဈပှားပွီးနောကျ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှကေို လိုကျလံစု ဆောငျးကာ သဂွိုလျပေးတဲ့ဝနျဆောငျမှုကို ပွုလုပျပေးတဲ့ ZAKA အရေးပျေါဝနျဆောငျမှုကုမ်ပဏီကလညျး တှဈတာမှာ “စိတျမပူပါနဲ့၊ ကြှနျတျောတို့ လုပျဆောငျနပေါတယျ” လို့ ရေးသားကာ လှောငျပွောငျခဲ့ပါတယျ။…
လူမှုကှနျရကျပျေါမှာတော့ ဟီဘရူးဘာသာစကားနဲ့ရေးသားထားတဲ့ פייסבוק_מתה# hashtag ကို ပွုလုပျကာရေးသားနပွေီး အဓိပ်ပာယျအားဖွငျ့ Facebook Dead လို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါဟာ မာ့ချဇူကာဘတျအတှကျတော့ စိတျရှုပျထှေးစရာအဖွဈတဈခုအနနေဲ့ ရှိလာနိုငျပွီး သူ ပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ ကုမ်ပဏီနာမညျက လူသားအားလုံးထိတျလနျ့ကွောကျရှံ့ကွတဲ့ သခွေငျးတရားနဲ့ ဆကျစပျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။…
■မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ Meta ဆိုတာက ဟီဘရူးဘာသာအရ သေခြင်းတရားလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေ
ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့က Facebook ဟာ သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကို Meta လို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ရဲ့ အခုလိုမျိုး နာမည်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာ လူအများအပြားက စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြပြီး အနာဂတ်မှာဖြစ်တည်လာမယ့် ပုံရိပ်ယောင်ကမ္ဘာအတွက် Facebook ဘက်က ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုကို ပြင်ဆင်လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။…
ဒါပေမယ့်လည်း Facebook ၊ Instagram ၊ Whatapp တို့ကတော့ ကုမ္ပဏီအောက်မှာ မူလအတိုင်း ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ VR နားကြပ်တွေအသုံးပြုကာ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ အလုပ်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းလောက၊ နေရာဒေသတစ်ခုကို အမှန်တကယ်ရောက်ရှိသွားသလို ခံစားစေရမယ့် ပုံရိပ်ယောင်ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီးဖို့အတွက်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီဘက်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။….
အခုအခါမှာတော့ Meta ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဟီဘရူးဘာသာစကားအရ Meta ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ သေခြင်းတရားလို့ ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ကြောင်း နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Nirit Weiss-Blatt က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဂျူးအသိုင်းအဝိုင်းမှာတော့ ဒီနာမည်ကို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ လှောင်ပြောင်ကြလိမ့်မယ်လို့ သူမက ဆက်ရေးခဲ့တယ်လို့ Time of Israle သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။…
မတော်တဆမှု ဒါမှမဟုတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လိုက်လံစု ဆောင်းကာ သဂြိုလ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ZAKA အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီကလည်း တွစ်တာမှာ “စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်” လို့ ရေးသားကာ လှောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။…
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့ ဟီဘရူးဘာသာစကားနဲ့ရေးသားထားတဲ့ פייסבוק_מתה# hashtag ကို ပြုလုပ်ကာရေးသားနေပြီး အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် Facebook Dead လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်အတွက်တော့ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာအဖြစ်တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိလာနိုင်ပြီး သူ ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီနာမည်က လူသားအားလုံးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြတဲ့ သေခြင်းတရားနဲ့ ဆက်စပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။…
Previous Article ■ပွောငျးလဲခဲ့တဲ့နာမညျနဲ့ပတျသကျပွီး ဒျေါလာသနျး ၂၀ လောကျ ကုနျမယျ့အရေးကွုံနတေဲ့ ဖဘှေ့တျချ
Next Article ■အမရေိကနျ လကွေောငျးတှဆေီက လြှို့ဝှကျခကျြ ခိုးယူမှုနဲ့ တရုတျထောကျလှမျးရေးတဈဦး ပွဈဒဏျကြ